Beelaha Warsangali oo go’aamo culus ka soo saaray xaalada siyasadeed ee gobalka Sanaag (daawo) – Radio Daljir
Beelaha Warsangali oo go’aamo culus ka soo saaray xaalada siyasadeed ee gobalka Sanaag (daawo)
Juunyo 21, 2019 3:57 g 0
Magaaladda Badhan ee gobalka Sanaag waxaa maalmihii ugu dambeyeey ka socday shir loga hadlayeey xaaladda iyo xoreynta gobalka Sanaag.
Shirkan waxaa ka qayb galay qaybaha kala duwan ee Beelaha Warsangali, sida waxgaradka, siyaasiyinta, Nabadoonada, dhalinyarada, haweenka iyo bulshadda gobalka Sanaag.
Ugu dambeyn shirkaas waxaa laga soo saaray qodobo dhowr ah oo quseeya xoreynta degmooyinka dhimman ee gobalka sanaag. Hoos ka daawo qodobada shirka.
Wasiirka Arrimaha Gudaha DFS oo Dhuusamareeb gaaray (sawiro)